अवसरसँगै चुनौति पनि थपिएका छन् « Anumodan National Daily
प्रदेश नम्बर ७ मा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीबाट मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गरिएका ४८ वर्षीय भट्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा डोटी जिल्ला अध्यक्ष हुन् । उनी प्रशाद भट्ट र शारदा भट्टका साहिला छोरा हुन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारमा जन्मिएका भट्टले आठ कक्षाको पढाई छोडेर १४ वर्षसम्म भारतमा विताएका थिए । भारतको पञ्जावमा पाँच वर्ष र मुम्बईमा १२ वर्ष गरी १७ वर्षसम्म चौकीदारका रूपमा काम गरेका उनले २०४७ सालमा अखिल भारत नेपाल एकता समाजको सदस्यबाट राजनीति सुरु गरेका थिए ।
माओवादी युद्ध शुरु भएपछि उनी २०५६ सालबाट पूर्णकालीन सदस्य बनेका थिए । भारत प्रवासबाटै जिल्ला कमिटी डोटीको सदस्य तथा क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य रहेका उनले २०५८ सालदेखि महाराष्ट्र मुम्बईको नेपाली जनअधिकार सुरक्षा समितिमा रहेर काम गरेका थिए ।
२०६१ सालमा पार्टीको निर्णयअनुसार नेपाल फर्किएका उनी २०६२ सालमा माओवादीको डोटी सचिव तथा २०६३ सालमा जिल्ला सहइञ्चार्ज र ०६४ सालबाट जिल्ला इञ्चार्जका साथै २०७१ साददेखि पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका छन् ।
उनी २०६४ र २०७० सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचन लडेर पराजित भएका थिए । प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्रीका लागि सिफारिस भएका प्रदेश सांसद भट्टसँगको कुराकानीको सारसंक्षेप :
मुख्यमन्त्रीका रूपमा तपाईलाई सिफारिस गरिएपछि तपाईको पार्टीभित्र विवाद देखिएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
– पार्टीको प्रदेश कमिटीले मलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा केन्द्रमा नाम सिफारिस गरेको छ । मुख्यमन्त्री बनाउने वा नबनाउने पार्टीको निर्णयमा भरपर्छ । म मुख्यमन्त्रीका लागि योग्य छु र बन्नेमा विश्वस्त छु । पार्टीले मुख्यमन्त्रीका लागि सिफारिस गरेकोले थप जिम्मेवारी महसुस गरेको छु । सबैलाई साझा रूपको र समग्र विकासका लागि अघि बढ्ने सोच राखेको छु ।
मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ ?
– बाध्यताले सानै उमेरमा भारतमा रोजगारी गर्न जानु पर्‍यो । हाम्रो देशमा शिक्षा व्यवस्था राम्रो नहुँदा बीचमै पढाई छोडेर जिविकोपार्जनका लागि भारत गए । सबैलाई थाहा छ, भारतमा नेपालीमाथि कस्तो व्यवहार हुन्छ ? भारतको हेपाहा प्रवृति, न्यून ज्यालादारीमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, अपहेलित हुनुपर्ने लगायतका धेरै समस्या मैले पनि भोगेको छु । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि राजनीतिमा प्रवेश गरे । आज हामीले परिवर्तन ल्याएका छौं । यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । मैले त गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नका लागि ईच्छा जाहेर गरेको थिए । पार्टीले मलाई प्रदेशको चुनावका लागि टिकट दियो र आज प्रदेशमा विजयी भएपछि मुख्यमन्त्रीको पदका लागि सिफारिस गरेकोमा खुशी पनि छु र थप जिम्मेवारी पाएको महशुस गरेको छु ।
प्रदेशको विकासका लागि कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
– देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । अहिले अवसरसँगै चुनौति पनि थपिएको छ । विगतमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली थियो । यो प्रदेश केन्द्रबाट उपेक्षित भयो भनेर दोषारोपण गरिरहन्थ्यौ । अब सबै अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको छ । सबै अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेशको हिमालदेखि तराईसम्मको जनताको हितअनुसार योजना र नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । हामीले प्रदेशको विकास, समृद्धिका लागि विज्ञ, सरोकारवालाहरू, नागरिक समाज सबै स्थानीयको सल्लाह, सुझाव अनुसार योजनावद्ध ढंगले अघि बढ्नु पर्छ । प्रदेशको विकासका लागि काम गरेर अघि बढ्दा विभिन्न किसिमका बाधा अड्चन आउन सक्छ । ती बाधा अड्चनको उचित ढंगले समाधान गरेर अघि बढ्ने चुनौति छ ।
हरेक पार्टीको लक्ष्य आफ्नो क्षेत्रको विकास र जनताको चाहना अनुरूप काम गर्नु हो । सबै दलका नेताहरू यस प्रदेशको विकास गर्न चाहन्छन्, तर विकास गर्ने तरिका फरक हुन्छ । ७ नम्बर प्रदेशको विकासका लागि सबै पार्टीका नेताहरू साझा रूपबाट जानुपर्छ । सबै दलका नेताहरूले पार्टीको आस्थाभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । र, सबैलाई सँगसँगै लगेर प्रदेशको विकास, समृद्धितर्फ लाग्ने छु ।
यस प्रदेशका समस्याहरू के–के हुन् ?
– ७ नम्बर प्रदेशको समस्या हिमाल, पहाड र तराई सबैमा एकै छ । अशिक्षा, गरिवी, बेरोजगार लगायत यस क्षेत्रका मुख्य समस्या हुन् । सबै क्षेत्रमा पुर्वाधारको विकास नहुनु, उद्योग कलकारखानाको स्थापना नहुनु, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु लगायत यस क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेका छन् । गरिवीका कारण जिविकोपार्जन गर्न कठिनाई हुन्छ र स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा सानै उमेरमा भारत पलायन हुनुपर्ने यहाँको अवस्था छ । त्यस्तै, हिमाल, पहाड र तराईमा अझै विभिन्न प्रकारका छुवाछूत, कमैया, हलियाका समस्या यथावत छन् । विगतका दिनमा केन्द्रीकृत सासन भएकाले ७ नम्बर प्रदेश उपेक्षित भयो । सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा पुग्न सकेको छैन् । यस प्रदेशको सुगम क्षेत्र भनु वा दुर्गम क्षेत्र भनु समस्या साझा नै रहेका छन् ।
यस प्रदेशका विकासका सम्भावनाहरू के–के हुन् ?
– ७ नम्बर प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, जल, जडिबुटी, वन लगायतको सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा धेरै पर्यटकीय स्थल रहेका छन् । ती क्षेत्रमा पूर्वाधार पुर्‍याउन सक्ने हो भने पर्यटकहरूमा आकर्षण बढ्छ । पर्यटन क्षेत्रबाट मात्रै धेरै युवाहरू स्वरोजगार बन्न सक्छन् । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने हो भने यस क्षेत्रको भोकमरीको अन्त्यसँगै यस क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा पनि अन्नहरू निर्यात गरि प्रदेशको आय बृद्धि गर्न सकिन्छ । १० हजार मेगावाटको कर्णाली, साढे आठ हजार बढी क्षमताको पञ्चेश्वर, साढे सात सय मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती लगायतका जलस्रोतको उपयोग मात्रैले पनि प्रदेश नम्बर ७ लाई मुलुककै सबैभन्दा धनी प्रदेशमा स्थापित गर्न सकिन्छ । हामी प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरेर अघि बढ्छौं । हामीले हाम्रै जडीबुटीबाट बनेको औषधि अरूबाट किनेर खाइरहेका छौ । अब हामी आफैले यहीको जडिबुटी उपयोग गरेर औषधिमा आत्मनिर्भर बन्नु पर्छ ।
माघ २५ गते (epaper)